Ukwahlukana phakathi koMthetho weSikolo kunye noTywala
Kubafundi nabazali Prelaw Prep
Ukuba ucingisisa isikolo somthetho, unokuba uzibuza ukuba isikolo somthetho eyahlukileyo siya kuqhathaniswa njani nesipiliyoni sakho se-graduate. Inyaniso kukuba, isikolo somthetho siya kuba namava ahlukeneyo emfundo ngeendlela ezintathu:
Jamie Grill / Getty Izithombe.
Yilungiselele umthwalo omningi kakhulu kunomsebenzi obunzima kunokuba unayo kwi-grad. Ukuze uzalise kwaye uqonde konke ukufundwa kunye nezikhundla zesikolo somthetho kunye nokuya kwiiklasi, ukhangelele ukulingana nomsebenzi wesikhathi esigcwele weeyure ezingama-40 ngeveki, ukuba akuninzi.
Awuyi kuba noxanduva lwezinto ezingaphezulu kunokuba uphantsi kwesiqulatho, uza kujongana neengcinga kunye neengcamango ongazange uzihlangabezane nazo ngaphambili kwaye zona zihlala zilukhuni ukufaka intloko yakho ngeenxa yokuqala. Akunzima ngokwenene xa uwaqonda, kodwa kuya kufuneka ubeke ixesha elide ekufundeni nasekusebenziseni.
Iifoto zeHero / i-Getty Izithombe.
Okokuqala, igama elithi "iindibano" lithetha kakubi kakhulu kwiiklasi zezikolo ezininzi. Kukho iintsuku apho unokungena kwiholo yokufundisa, uhlale apho ngeyure, kwaye uphulaphule umfundisi uphonononge ulwazi olubalulekileyo njengoko lubekwe kwincwadi yokufunda. AbaProfesa abayi kuba ne-spoon bakondla iimpendulo kwiimviwo zakho zokugqibela kwisikolo somthetho kuba uvavanyo lweziko lezomthetho ludinga ukuba usebenzise ngokuzenzekelayo izakhono kunye nezinto ozifundileyo ngexesha le-semester, ungagqithisi ngokungqongqo ukuba yintoni incwadi yesifundo kunye noprofesa.
Ngokufanayo, kuya kufuneka uhlakulele isitayela esitsha senqaku-esithatha kwisikolo somthetho. Ngoxa ukukopisha yonke into inzululwazi ekuthiwa yasebenza kwikholeji, ukufumana ininzi kwiprogram yomthetho wesikolo kufuna ukuba uhlawule ngokukhawuleza kwaye ubhale phantsi amanqaku aphambili kwintetho ongeke uyiqoke ngokukhawuleza kwi-casebook, njengomthetho wokuthabatha kwimeko kunye neembono zeprofeseri kwizifundo ezithile.
Ngokuqhelekileyo, isikolo somthetho sisoloko sisebenzisana kakhulu kunokuba sihlaziywe. Iprofestile kaninzi inabantwana ababonisa iziganeko ezinikezelweyo kwaye baya kubiza ngokukhawuleza abanye abafundi ukuba bazalise izikhalazo okanye baphendule imibuzo ngokubhekiselele kwimeko eyahlukileyo okanye imiqobo emthethweni. Oku kuyaziwa ngokuba yiSety Way kwaye ingaba yinkathazo yeeveki zokuqala zesikolo. Kukho iintlobo ezahlukeneyo kule ndlela. Abanye abaprofesa baya kukunika iipaneli kwaye bakuxelele ukuba amalungu ephaneli yakho "aya kufowunelwa" ngeliveki ethile. Abanye bacela nje amavolontiya kunye nabafundi "batshayela" kuphela xa kungekho mntu uthethayo.
AbantuImages.com / Getty Izithombe.
Ibanga lakho kwiklasi yesikolo liya kuxhomekeka kwisigqibo sokugqibela ekugqibeleni ukuba uvavanye ukukwazi kwakho ukufumana nokuhlalutya imiba esemthethweni kwiipatheni ezinikeziweyo. Umsebenzi wakho kwisivivinyo somthetho wesikolo kukufumana umba, uyazi umgaqo womthetho ophathelene naloo mbandela, sebenzisa umgaqo, kwaye ufikelele kwisiphetho. Le ndlela yokubhala iyaziwa ngokuba yi-IRAC (Inkcazo, uMthetho, Uhlalutyo, Isiphetho) kwaye isitayela esetyenziswa ngabaqulunqa.
Ukulungiselela ukuhlolwa kwesikolo somthetho kuyahluke kakhulu kunokuba kukho iimvavanyo ezininzi ezingaphantsi, ke qiniseka ukuba ujonga iimviwo zangaphambili kwi-semester ukuze ufumane ingcamango yoko kufuneka ufunde. Xa uqhuba uvavanyo, bhala impendulo yakho kwisifundo esandulelayo uze uyilinganise nomzekelo wempendulo, ukuba kukho umntu, okanye uxoxe ngawo kunye neqela lokufunda. Emva kokuba ufumene ingcamango yento ebhala ngayo ngokungalunganga, buyela emva kwaye ubhale kwakhona impendulo yakho yangaphambili. Le nkqubo inceda ukuphuhlisa izakhono zakho ze-IRAC kunye nezibonelelo ekugcinweni kwezinto zokufunda.
Uludwe lweeNqununu zeSikolo soPhulo lweeBakala eziPhakanyiswayo kwiSikolo soMthetho
Ngaphambi kokuba uthenge i-Laptop kwiSikolo soMthetho
Ihlobo elingaphambi koNyaka wakho wokuQala weSikolo soMthetho
Funda isiGaba oza ku funeka Ufike kwiSikolo soMthetho
Umlinganiselo: Umthetho weSikolo ulungiswa ngokusebenzisa i-Undergrad
Iincwadi zeNkcazo kunye neeNkcazo zoLwazi lweSikolo soLwazi lweSikolo soLutsha lwe-1L
Ukuqonda iZimfuneko kwiSicelo seSikole seNkundla yoMthetho
Uluhlu lokuHlola lweeMpahla zoLwazi lweSikolo
Indlela yokungena kwiSikolo soMthetho
UYoshuwa - Umlandeli othembekileyo kaThixo
UFrank Lloyd Wright kwiGuggenheim
Yintoni eyahlukileyo phakathi kwekhefu kunye no-Let?
Imithetho Yokuxhatshazwa Ngokuqhelekileyo Abazali Benza Iintsholongwane ZamaKristu
UkuCwangciswa kweeHomeschool kunye neZingcebiso zeQumrhu
'80s Abaculi beMculo abafanele bajoyine iHolo leDolophu kwiShumi elizayo
Ubukhoboka banamhlanje: Abantu abathengiswayo
Izicwangciso ze-Stoic 3 zokuba nandiphe
Ngubani ohlawulela iiNtengiso zePolitiki?
Indlela yokudanda kwiKholeji
Zingaphi izithuba kwi-Congress yase-United States
Iindlela ezili-10 zokuba ngumfundi ophumelelayo kwi-Intanethi
Inkcazo yamanzi kwiKhemistry
Kuthetha ukuthini i-Flat (♭)?
Umqulu we-Atomic Inkcazo
Umbuzo weTek - uLwimi lweSpanish
Yintoni Umehluko phakathi kweSixeko kunye nokuhlala?
Imfazwe Yehlabathi I: I-HMS Queen Mary
I-Texas ineNkqubo yokuPhephelwa kweengxaki zeSikolo seKota
Isifundo soMfundisi kaParris "kwiCrucible"
Guru Defined: Ukukhanyisa Umphefumlo
Yintoni i-Golfers ithetha ngokuthi "iPin High" kunye ne "High Hole"?